Nzira yekusarudza calibration uremu?
Chii chatinofanira kutarisisa kana tichida kutenga zviyero? Pane mapoinzi akati wandei pazasi: 1. Zvinoenderana nekurongeka kwechiyero / chiyero chaunofanira kudzikamisa. Zviremera zvepamusoro zvekirasi zvichave nekukwirisa kwakanyanya, asi kana zvisina kukodzera, zvinongo wedzera mutengo. Uye epasi ekirasi zviyereso ...
Izvo zvakapfuura nezvazvino zvekirogiramu
Yakawanda sei inorema kilogiramu? Masayendisiti akaongorora dambudziko rinoita seriri nyore kwemazana emakore. Muna 1795, France yakazivisa mutemo waiti "gramu" se "huremu hwakazara hwemvura mubhokisi rine huwandu hwakaenzana nezana remamita patembiricha apo ic ...
Inotakurika weightbridge - dhizaini nyowani inokodzera kutamiswa
JIAJIA chiridzwa chinofara kuzivisa kuti izvozvi tave nerezinesi rekugadzira nekutengesa kweiyo foldable weightbridge nezvose zvinodiwa zvitupa zvepasi rose. .
ne admin pane 21-01-14
Jiajia akapinda mumusangano we INTERWEIGHING indasitiri mu2020 zvakare. Nekuda kwehosha iyi, kunyange shamwari dzakawanda dzenyika dzisingakwanise kutora chikamu mune yegore indasitiri chiitiko, isu tichiri kupfuudza ruzivo rwekuratidzira kune wese mutengi kuburikidza neInternet, kusanganisira new te ...
Nyowani Balance yehuremu calibration
2020 igore rakakosha. COVID-19 yaunza shanduko huru pabasa redu uye nehupenyu. Vanachiremba nemanesi vakaita mipiro mikuru kuhutano hwemunhu wese. Isu takabatsirawo chinyararire kurwisa denda iri. Kugadzirwa kwemask kunoda kuyedzwa zvakanyanya, saka kudiwa kwe te ...
Scale Kuchengetedza Kurema, Kuchengeta Misa, Certified Weights, Sheuri Beam Load Cell, Kuyera Kurema Set, Calibration Zviyero zveDhijitari Scales,